Bemba oo laga mamnuucay musharraxa madaxweynanimada - BBC News Somali
Bemba oo laga mamnuucay musharraxa madaxweynanimada
Hogaamiye kooxeedki hore ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Jean-Pierre Bemba ayaa laga mamnuucay inuu ka qayb galo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi dhawaan ka dhici doonta.
Bemba oo ah siyaasi caan ah ayaa waxa horay loo soo taagay maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ee ICC iyada oo lagu soo eedeeyey inuu dambiyo dagaal uu geystay muddadi uu hoggaamiye kooxeedka ahaa.
Bemba wuu ku raja weynaa inuu iisu soo taago musharrax madaxweynanimada dalkaasi uga tartama doorashada bisha December dalkaasi ka dhaceyso.
Hase yeeshee, maxkamadda dastuuriga ee dalka Congo ayaa waxay soo saartay go'aan musharraxnimadiisa ay ku mamnuuceyo iyada oo sheegtay inuu yahay nin maxkamadda dambiyada dagaalka la soo taagay.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ayaa bilooyin ka hor ka noqotay xukunki ay ku qaadday Bemba ee ahaa inuu dambi galay, waxayna maxkamaddu sheegtay ineysan helin wax caddeyn ah oo muujinaya inuu ninkan dambigaasi uu galay.
Go'aanka ICC kaddib kumannaan taageerayaashiisa ah ayaa waddooyinka Kinshasa isugu soo baxay si ay u muujiyaan farxddooda iyo taageerada ay u hayan Bemba.
Waxayna taageerayashiisu dalbadeen inuu dalkiisa hoyo dib ugu soo laabto siyaasaddana uu ku soo biiro.
Jean-Pierre Bemba oo Kinshasa ka soo dagaya
Wuxuuna ugu dambeynti uu dib ugu soo laabtay magaalada Kinshasa bishi August si uu u billaabo abaabulka musharraxnimda madaxweynaha doorashada soo socotana uu uga qaybgalo.
Kumannaan qof oo safaf dhaadheer ku jirta ayaa sugeysay si ay u salaamaan balse hadda maxkamadda ayaa go'amisay inuu sharcigu uu u oggolaaneyn inuu musharraxnimo iisu soo taago.
Taageerayaasha When Jean-Pierre oo Kinshasa ku soo dhaweynaya
Wakhti xaadirkanna Bemba tallaabbada uu ka qaadanayo go'aanka maxkamadda dastuurka Congo ay soo saartay weli lama garan.
Iyada oo doorashada Jamhuriyadda Dimuqradiga Congo (DRC) ka dhici lahayd muddo 2 sana ah hadba dib loo sii dhigayey ugu dambeyntina la go'aamiyey iney dhacdo bisha December ee soo socota.
Dhammaan indhaha siyaasiyiinta dalkaasi ayaa waxay isha ku hayan Mr Bemba inuu taageeri doono musharrax kale iyo waxa kale uu sameeynayo, iyada oo xubna ka tirsan xisbiyada mucaaradka ay u suurageli weyday iney doorashada ka qayb qaataan.
Waxaana guud ahaan su'aal la geliyey doorashada Congo ka dhici doonto sida ay u noqon karto mid la aqbali karo.
Dhakhaatiir ku guuleystay qaliin ay kelli xayawaan ugu talaaleen nin
Soomaali ka tirsanaan jiray booliiska Mareykanka oo loo haystay dil oo dib loo xukumay